Sida loo Download Videos ka TV.com u offline Radidiyaha
> Resource > Download > Sidee Waxaad ka TV.com Download karaa Videos
Tiro badan oo videos, filimada, clips ka mid ah ay muujinayso yihiin curated on TV.com. Iyadoo ku riyaaqayaa hoorto videos on this site, sidoo kale waxaa laga yaabaa in aad dareento nixi aanay soo bixi videos ka awood. Ma jiraa hab ka soo baxay? Ha welwelin. Waxaad tahay meel ku haboon in la helo Wondershare AllMyTube ( AllMyTube for Mac ) caawimaad. Waxaa kuu saamaxayaa inaad soo bixi videos ka TV.com kaliya click ah oo aad xor u tahay badalo ku videos bixi in qaabab kasta oo ku haboon kombuyuutarrada gacanta aad. Ma sugi karo in aad iska baarto? Na raac si aad u aragto tutorial ah oo faahfaahsan hoos ka.
Laakiin ugu horreeya oo dhan, hubi in aad ka soo bixi barnaamijkan oo lagu rakibay on your computer. Dooro mid ka mid version oo guji hoos ku link Download ku. Burcad barnaamijkan dib markii la rakibey.
1 Raadi videos aad jeceshahay on TV.com
Ku qor tv.com on your browser. The weyn saddex daalacashada yihiin doorbiday, sida Firefox, Chrome iyo IE. Markaas maraan si ay muujinayso aad jeceshahay oo guji video ay ku ciyaaraan.
2 Download video ka TV.com
Waxa kale oo aad isku dayi kartaa hab kale. Copy url ee video ka bar cinwaanka iyo riix URL paste button on suuqa kala aasaasiga ah ee barnaamijka. Tani waxay kaa caawin doontaa in loo gaaro natiijo la mid ah.
Haddii aad ka soo dejisan videos ka TV.com oo kaliya aan u daawado ku computer, waa inaad ku labanlaabtaa riixi kartaa inuu ciyaaro ka videos laga heli karo ee lagala soo bixi tab. Laakiin haddii aad jeceshahay in aad saaray videos soo galeen qalabka la qaadi karo oo ku daawato marka uu jiro xiriir internet ma heli karo, waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay si loogu badalo videos ugu horeysay. Raadi videos ee lagala soo bixi tab iyo badalo button on xaq ah video kasta item. Riix badhanka dooro qaab video ku haboon doono qalabka la qaadi karo aad, sida MOV, AVI ama kuwa kale a. Ugu dambeyntii, riix OK u bilowdo nidaamka soo celiyaa.
Fudud, miyaanay ahayn? Waa in aad ka hor tago si uu u siiyo isku day ah oo aad aragtaan sida ay u caawin doonaa ka Hodmin noloshaada. Waxaad xitaa uma baahna in ay ka walwalsan tahay dhibaatada sharci ah ilaa iyo inta aadan-qeybiso videos for ujeedooyin kale. Mar dambe ma ka waaban. Hel ka mid ah iyo bilaabaan in ay hadda ku raaxaystaan.